Maitiro Eku Backup Yako iPhone Ku iTunes - Iphone
maitiro ekuti uwane maapuro maapplication ku iphone ios 10
maitiro ekugadzirisa iyo yakasviba iphone skrini
www 401k com muchiSpanish
Maitiro Eku Backup Yako iPhone Ku iTunes
Unoda kushandisa iTunes negadziriro yeparutivi iPhone wako, asi hauna chokwadi sei. Izvo zvakakosha kuve ne backup yakachengetedzwa, kungoitira kana chimwe chinhu chikatadza ne iPhone yako. Muchinyorwa chino, ndicha kukuratidza sei negadziriro yeparutivi iPhone wako iTunes !
Ongorora: Kana iwe ukagadzirisa Mac yako kune macOS Catalina 10.15, iwe unoshandisa Finder kugadzirisa yako iPhone. Matanho acho akafanana, asi unozochengeta yako iPhone muKutsvaga -> Nzvimbo -> [Yako iPhone].
Chii chinonzi An iPhone negadziriro yeparutivi?
Yegadziriro yeparutivi ndiyo kopi yeese ruzivo pane yako iPhone. Izvi zvinosanganisira zvinyorwa zvako, vanobata navo, mapikicha, mameseji, Apple Mail data, uye zvimwe zvakawanda!
Izvo Zvakakosha Kuchengeta Yangu iPhone?
Hongu, zvakakosha zvikuru kuponesa negadziriro yeparutivi pamusoro iPhone wako. Kana yako iPhone ichisangana nedambudziko rakaoma re software kana kutyora zvachose, unogona kunge usina mumwe mukana wekugadzira backup. Nekugara uchitsigira yako iPhone, iwe uchagara wakagadzirira kuitira kana chimwe chinhu chikatadza kufamba.
Ini Ndino chengeta Sei Iyo Backup Yeyako iPhone Kune iTunes?
Kutanga, shandisa tambo yeMheni kuvharisa yako iPhone mune chero komputa ine iTunes. Vhura iTunes wobva wadzvanya pane icon ye iPhone padyo nekona yekumusoro-kuruboshwe kona yekona.
iphone kutora zvachose kuchaja
Tevere, tinya Dzokera Kumusoro Izvozvi pasi Nemaoko Dzorera Uye Dzorera . A kufambira mberi bhaa uye mazwi 'Kutsigira Up 'iPhone'…' achaonekwa kumusoro iTunes.
Kamwe kufambira mberi bhaa yapera, unenge wagadzira iPhone negadziriro yeparutivi! Unogona zvakachengeteka tambanudza iPhone wako kubva kombiyuta yako.
Gadzira Up otomatiki iTunes Backups Pakombuta Yako
Nemaoko kugadzira iTunes backups pese paunovhara yako iPhone mukombuta yako inogona kunetesa. Neraki, iwe unogona kumisikidza iTunes kuti otomatiki negadziriro yeparutivi iPhone wako pese paunorivhara mukati.
Mushure mekubaya mu iPhone yako uye kuvhura iTunes, tinya iyo iPhone icon mune yepamusoro kuruboshwe-kona kona. Dzvanya denderedzwa padyo ne Iyi Computer uye tarisa bhokisi padyo ne Encrypt iPhone negadziriro yeparutivi . Iwe unozokurudzirwa kuisa password ye backup yako kana iwe uchinyora. Pakupedzisira, tinya Zvaitwa mukona rezasi rerudyi rekona.
hapana sim card rakaiswa mu iphone
Nei Ndichifanira Encrypt Yangu iPhone Backup?
Encrypting yako iPhone backup inopa imwe yekuwedzera nhanho yekuchengetedzeka kune rako ruzivo. Dhata rako rakavharirwa uye rakakiiwa, saka harigone kuwanikwa kana rakakuvara mumaoko asiri iwo. Kunyangwe zvisingaite kuti data rako ringave rakakanganiswa neApple, zvinogara zviri nani kuve wakachengeteka kupfuura urombo.
Ini Ndinodzoreredza Yangu iPhone Kubva kuBackup yandakagadzira?
Kana iwe uchizomboda kudzoreredza backup yawakagadzira, maitiro acho akanaka nyore. Chivharidzira iPhone yako mukomputa imwechete yaunoshandisa kuitsigira uye kuvhura iTunes.
iphone 6 plus headphone mode
Usati unogona kudzorera iTunes negadziriro yeparutivi, unofanira kuva dzima Tsvaga yangu iPhone .
Paunenge uchinge wadzima Tsvaga yangu iPhone, tinya bhatani re iPhone padyo neiyo yepamusoro kuruboshwe-kona kona iTunes. Dzvanya Dzosera Backup pasi Nemaoko Dzorera Uye Dzorera . Tsvaga zita re iPhone yako mumenyu inodonhedza, wobva wadzvanya Dzosa .
Kick Kudzoka & Relax!
Unogona kuzorora nyore ikozvino kuti iwe wakatsigira iPhone yako uchishandisa iTunes. Ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa pasocial media kuti iwe ugone kudzidzisa yako mhuri uye shamwari maitiro ekuchengetedza yavo iPhones kune iTunes! Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo, siya mhinduro pasi pazasi.